La Direction de la Protection des Consommateurs
La Direction du Commerce Extérieur
PRIX DES PPN
VATOVAVY FITO VINAGNY
TRF Madagascar : Appel à Manifestation d’Intérêt
Andro natokana ho an’ny fifaninanana ara-barotra – 20 jona 2019|
Andro natokana ho an’ny fifaninanana ara-barotra, andiany faha roa : « Ny fahalalahana sy ny fahamarinan’ny fifaninanana : tombon-tsoa ho an’ny mpandraharaha sy ny mpanjifa ». Izany no lohahevitra novelabelarina nandritra ity fankalazana ity. Niarahana tamin’ireo filan-kevitry ny fifaninanana sy ny rafi-pahefana nasionaly misahana ny fanasaziana ara-barotra (ANMCC), rafitra izay ao ambanin’ny fiahian’ny minisitera, moa izany. Ity […]
Atrik’asa nasionaly hihaonan’ny fanjakana sy ny tsy miankina momba ny lavanila
Ho tohin’ny asa efa natao ho fanatsarana ny kalitao sy ny tontolon’ny varotry ny lavanila, dia notanterahina ny 18 Jona lasa teo, tao amin’ny Ibis Ankorondrano ny atrik’asa nasionaly hamerenana ny kalitaon’ny vokatra sy ny fomba fiasa manodidina ity sehatra ity . Vokatra fanondrana voalohany eto Madagasikara sady miantoka ny fampandrosoana ara-toe-karen’ny fierenentsika eo amin’ny […]
La vanille de Madagascar, une fierté de notre Ile
Malgré les instabilités socio-économiques, la filière vanille demeure un secteur clé de développement économique de Madagascar. A la veille du début de campagne de commercialisation, le MICA a parrainé l’événement HOREB-La Vanilla le samedi 15 juin dernier à Fénérive-Est. Cet événement a été marqué par la signature d’une convention de partenariat commercial des vanilles de […]
Andro iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny fahadiovan’ny sakafo-7 Jona 2019
« Fiarovana ny fahadiovan’ny sakafo, andraikitry ny rehetra ». Izany no lohahevitra nofidiana tamin’ny andro iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny fahadiovan’ny sakafo eto Madagasikara ny 7 Jona 2019 lasa teo. Ho marik’izany dia nisy ny fanentanana izay natao tetsy amin’ny FAO Ankorahotra. Nandray anjara tamin’izany hetsika izany ny MICA izay nosoloin’ny Sekretera Jeneraly, Fabrice RAHARIJAONA […]
MICA – Fampiofanana
Nandrindra atrikasa fampiofanana sy fanamafisana ny fahaiza-manao ho fanatsarana ny « commerce des services » ny Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asa tanana (MICA) ny 6 sy 7 jona 2019 teo tetsy amin’ny Le Pavé Antaninarenina. Notarihan-dRamatoa RAJOHNSON Tiava Ny Kanto, tompon’andraikitra ao amin’ny sampan-draharaha misahana ny tsena ivelany (DCE) izany. Ity fampiofanana ity dia nahafahan’ny […]
juillet 4th, 2019 webcommerce
Andro natokana ho an’ny fifaninanana ara-barotra, andiany faha roa :
« Ny fahalalahana sy ny fahamarinan’ny fifaninanana : tombon-tsoa ho an’ny mpandraharaha sy ny mpanjifa ». Izany no lohahevitra novelabelarina nandritra ity fankalazana ity. Niarahana tamin’ireo filan-kevitry ny fifaninanana sy ny rafi-pahefana nasionaly misahana ny fanasaziana ara-barotra (ANMCC), rafitra izay ao ambanin’ny fiahian’ny minisitera, moa izany. Ity andro ity dia nomarihina tamin’ny alalan’ny fifanakalozan-kevitra teo amin’ireo mpandray anjara ara-toe-karena (mpamokatra, mpamatsy, mpandraharaha ary mpanjifa) izay maro tokoa no namaly ny antso.
Komity nasionaly momba ny fanamorana ny varotra
Direction Générale du Commerce, 6 Rue, Wast Ravelomoria Ambohidahy Antananarivo, BP:454